संसदमा अनुपस्थित भएर खाएको तलब भ्रष्टचार हो ! - VOICE OF NEPAL
संसदमा अनुपस्थित भएर खाएको तलब भ्रष्टचार हो !
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:२६
– नारायण गाउँले, लण्डन।
बेलायती प्रधानमन्त्री कम्तीमा साताको एक दिन संसद् पुग्छिन् । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा भाग लिन्छिन् । विपक्षी दलका नेता नियमित संसद् जान्छन् र विचार राख्छन् । किनकि तिनको कर्तव्य त्यही हो । तिनले बुझ्ने तलब त्यसैका लागि हो ।
नेपालमा सांसद्हरूको उपस्थिति दयनीय छ । न प्रधानमन्त्री नियमित पुग्छन् न विपक्षी दलका नेता । बिजी भएर पनि होइन, दुई सय किलोको माला लगाउन, नचल्ने बिजुली बसको उद्घाटन गर्न, भ्रातृसङ्गठनका कार्यक्रममा घन्टौं लामो भाषण गर्न तिनले भ्यारहेछन् ।
सरकारको मुख्य ‘वाचडग’का रूपमा रहनुपर्ने गरी जिम्मेबारी र तलब-सुविधा खाने विपक्षी दलका नेता शेर बहादुर देउबाले संसदमा होइन, पोखरा पुगेर सरकारका कदमको समर्थन र विरोध गर्छन् । उनी संसद्को विकास समितिमा छन् तर त्यसको ३४ वटा बैठक बस्दा उनी सधैँ गयल छन् । यो संसद्को अपमानमात्र होइन, राज्यकोषको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार पनि हो । अर्का सांसद् प्रचण्ड पनि बैठकमा जाँदैनन् । उनले खाएको तलब पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
सरकारले गरेका निर्णय या कामको सत्तापक्षका सांसद्ले विरोध नगर्ने र त्यो स्वतः पास हुने पद्धतिका कारण विपक्षी सांसद्हरूको उपस्थिति कम भएको हुनसक्छ र ‘पास गर्नै पर्ने’ रूलिंगका कारण सत्तापक्षका सांसद् बढ़ी सक्रिय देखिन सक्छन् । तर, संसदमा नियमित उपस्थित हुनु र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दादेखि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय इश्युसम्म सक्रिय सहभागिता देखाउनु सांसदको कर्तव्य हो । ब्राजिलसँगको खेल जसरी पनि हारिन्छ भनेर निर्धारित स्पर्धामा नेपाली फुटबल टीम मैदानमा नउत्रिनु पूर्णतः गलत हो ।
माधव नेपाल पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् । तर उनी नियमित संसद् पुग्न भ्याएका छन् । कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई र गगन थापाजस्ता युवा सांसदहरू नियमित जाँदा रहेछन् । सुवास नेम्बांग पूर्व सभामुख भएर पनि नियमित उपस्थित देखिन्छन् । तर विपक्षी दलका सांसद र सरकारका मन्त्रीहरूको शून्यजस्तो उपस्थिति देखिन्छ ।
कार्यालय नजाने कर्मचारीलाई बिदा दिन मिल्छ तर के संसद् छिर्न नभ्याउने सांसदलाई बिदा गर्न मिल्दैन ? मलाई थाहा छ, आफ्ना आराध्य नेतामाथि मैले यसरी बोलेको तपाईंलाई मन पर्दैन, तर तपाईंले तिर्ने करले ती शानदार जिन्दगी बिताउँछन् भने तपाईंले प्रश्न गर्ने साहस जुटाउनै पर्छ ।